​Wasiirka Amniga: Gacanta ayaan ku dhignay Madaxii Amniyaadka Shabaab ee Banaadir
MUQDISHU, Somalia- Dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay howlgal laga sameeyey qeybo kamid ah Suuqa weyn ee Baaraka in lagu soo qabtay Madaxii Amniyaadka Kooxda Alshabaab ee gobolka Banaadir Cabdiwahaab Khaliif Axmed oo loo yaqaan (Ciise Tarabuun) , waxana howgalkan uu dhacay maanta oo axad ah.
“Waxaa maanta qabanay Cabdiwahaab Khaliif Axmed oo loo yaqaan (Ciise Tarabuun) oo dhibaatooyinkii ka dhacayay caasimadda masuuliyadeeda lahaa, hadda wuxuu ku jiraa gacanta dawladda oo caddaaladda ayaa la horgeynayaa,” Ayuu yiri Wasiirka Amniga Somalia.
Wasiirka oo ka hadlayay muhiimadda ay leeyihiin howlgalladan ayaa tilmaamay; “Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaan dalka ka wadnay howlgallo ballaaran oo lagu xasilinayo amniga caasimadda, waxana lagu guuleystay in laga hortago falal badan oo cadowgu maleegayeen”.
“Si aan u sii xoojinayo amniga ciidanku waxay sameyn doonaan wax walba oo suuragal ah. Waxaa la xiray qaar kamid ah jidadka xaafadaha dhex-dooda mara oo horey u furnaa ujeedka loo xirayna waa in lagu badbaadinayo shacabka Soomaaliyeed. Maalin walba qaraxyada iyo dhibabka ay geystaan argagixisadu waxaan ku weynaa nafta dadkeena qiimaha badan, si taas looga baaqsado waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo amniga caasimadda lalana shaqeeya ciidamadda howlgalka ku jira,” Ayuu yiri Wasiirka Islow.
Madaxweynaha Somalia oo booqday xarun ciidan oo ku taalla Kismayo
KISMAYO, Somalia- Madaxweynaha Somalia Maxamed Cabdullahi Farmajo, iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaarey magaalada Kismaayo, ee xarunta KMG ee Jubbaland.
Madaxweyne Farmaajo oo ay wehliyeen Xubno katirsan Labada Golle ee dowladda, ayaa waxaa kusoo dhawee ...
Farmaajo oo Safiiro cusub u magacaabay UK iyo Turkey
Somalia: Qarax ka dhacay duleedka Muqdishu
Qarax kale oo ka dhacey agagaarka KM4 magalaada Muqdishu
5 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay Muqdishu
Madaxweynaha Somalia oo Kenya gaaray [Sawirro]
DEG DEG: Qarax culus oo ka dhacay Muqdishu
RW Khayre: Heshiis ayaa lagu joojiyay Gargaarkii ciidamada 17.12.2017. 02:36
Soomaaliya: Ciidamo xoog ku galay Guriga Fanaanka Nimcaan Hilaac 16.12.2017. 23:38
Aabaha dhalay Neymar oo kulan la qaatay Madaxweynaha Real Madrid 16.12.2017. 19:42
Ciyaartooyda Jubbaland oo 2-1 ugu awood sheegtay Galmudug 16.12.2017. 18:39
Maalqabeen u dhashay Falastiin oo lagu xiray dalka Sacuudiga 16.12.2017. 18:07
Soomaaliya: Kalfadhiga Gollaha Shacabka oo la hakiyay [Dhageyso] 16.12.2017. 17:48